पुष्प व्यवसायमा चम्किएको परिवार, वार्षिक १ करोडको कारोबार
विकाश पराजुली बुटवल, ८ चैत
फूल सुख होस् वा दुःख, पूजा, अनुष्ठान् होस् या दुखद् कर्म, हरेक कार्यका लागि आवश्यक पर्छ । अनि सुन्दर फूलहरू टपक्क टिपेर शिरमा सिउरिन कसलाई पो मन लाग्दैन र ? फूलको सुगन्धमा रमेर आन्नन्द लिन जो कोही पनि अघि सर्छन् ।
फूल देख्दा आनन्द महसुस गर्ने हामीलाई अझ फूलसँग दैनिक उठबस गर्न पाए कस्तो हुँदो हो ? हामी कति आनन्दित हुन्थ्यौँ ? अहिले हामीले सोच्न मात्र सक्छौँ ।
तर, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका– ४ ड्राइभरटोलमा रहेको गुप्ता नर्सरी सञ्चालकहरूले भने यो सबै महसुस गरेका छन्, त्यो पनि ३ पुस्तासम्मकाले ।
रूपन्देहीमा पहिलो पटक २०२२ सालमा स्व. रघुनाथ गुप्ताले सुरु गरेको गुप्ता नर्सरी यस क्षेत्रको चर्चित नर्सरी हो । रघुनाथले सुरुमा यसलाई तरकारी खेतीसँग जोडेर नर्सरी गरेका थिए । अहिले यो नर्सरी व्यवसायलाई उनको तेस्रो पुस्ताले निरन्तरता दिएका छन् ।
स्वर्गीय रघुनाथका छोराहरू विनोद, शम्भु, राजेन्द्र, राजेश, सुरज, अर्जुन गुप्ता र नातिहरूसमेत अहिले उही नर्सरीमा काम गर्न व्यस्त छन् ।
गुप्ता नर्सरीले फूलसँगै फूलका बिरुवा र फलफूलका बिरुवाहरू उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको छ । ५४ वर्षदेखि पुष्प व्यवसायमा रमेको गुप्ता परिवारमा अहिले ६ परिवारका २५ जनाभन्दा बढीले साथ दिएका छन् । ६ दाजुभाइहरू मिलेर गरेको यो नर्सरी व्यवसायबाट उनीहरूले मनग्य आम्दानी पनि गरेका छन् ।
मेला, महोत्सवमा गुप्ता नर्सरी अनिवार्य जस्तै छ यस क्षेत्रमा । धेरै मेलामा उत्कृष्ट स्टलको पुरस्कार हात पार्ने यस नर्सरीले पछिल्लो समय चाडपर्व लक्षित फूलहरू पनि उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
यहाँका मेला, महोत्सव, विवाह, ब्रतबन्धमा गुप्ता नर्सरीका फूलहरू पुग्छन् । त्यति मात्र होइन, बुटवलबाहिर पनि फूलहरू निर्यात गरिरहेको छ यस नर्सरीले । रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पोखरा र काठमाडौं गुप्ता नर्सरीका मुख्य बजारहरू हुन् ।
१ सय ५० जातका फूलहरू नर्सरीमा
फूल, फूलका र फलफूलका बिरुवाहरू नर्सरीमा छन् । सिजनलमा सयपत्री, थिटुनिया, डान्थस, सिनेरिया फूलहरू नर्सरीमा छन् । अन्नामेटल प्लान्ट, ग्रिन प्लान्ट र डेकोरेसनका लागि आवश्यक १ सय ५० भन्दा बढी फूलहरू नर्सरीमा भएको सञ्चालक शम्भु गुप्ता बताउँछन् ।
नर्सरीमा आँप, लिची, कटहर, अम्बा, कागती, सुपारी, नरिवललगायतका बिरुवाहरू समेत पाइन्छन् । यी सबैको नर्सरीले आफैँ बिरुवा तयार गर्छ । त्यति मात्र होइन, नर्सरीले सिजनल फूलबाहेक भ्यालेन्टाइनका लागि गुलाब, दशैँमा दुर्गा पूजाका लागि र बर्खामा फलफूल लगाउने समय भएकाले त्यसलाई लक्षित गरेर फूलहरू एवम् बिरुवाहरू तयार गर्ने गर्छ ।
नर्सरीमा २५ रुपैयाँदेखि बिरुवाको साइजअनुसार १ हजारसम्म र सजावटका लागि १ सय २५ रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँसम्मका फूलका बिरुवाहरू पाइन्छन् ।
वार्षिक १ करोड रुपैयाँको कारोबार
तिलोत्तमा ड्राइभर टोलमा गुप्ताको बिक्री केन्द्र हो । यो नर्सरीले तिलोत्तमाकै कफी कम्पनीमा २ बिघामा र ओमसतियाको ठुटिपीपलमा २ बिघा र पाल्पामा १३ रोपनीमा नर्सरी स्थापना गरेको छ ।
यस क्षेत्रमा सिजनल माग हुने फूलको ७५ प्रतिशत बजार गुप्ताको नर्सरीले ओगटेको छ । जिल्ला र जिल्लाबाहिर गरी वार्षिक १ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गुप्ता नर्सरीका सञ्चालक सुरज गुप्ताले बताए ।
बढी उत्पादन गर्दा बजारको समस्या
फूलमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएका गुप्ता नर्सरीका सञ्चालकहरू बढी उत्पादन गर्दा बजारको समस्या हुने गरेको बताउँछन् । ‘समय परिर्वतनसँगै फूलको माग बढेको छ तर उत्पादन बढी हुँदा बजारीकरणको समस्या छ’, सञ्चालक सुरज गुप्ताले भने, ‘कम उत्पादन गर्दा बढी लागत हुन आउँछ, बढी उत्पादन गर्दा कम लागत पर्छ तर बजारको समस्या हुन्छ ।’
उनले फूल देख्दा आनन्द र राम्रो लागे पनि फूलको व्यापार चुनौतीपूर्ण भएको ठान्छन् । ‘कसैले सानो दाग लागेको देखे भने लैजाँदैन, चाडपर्वहरूमा लक्षित गरेर ठीक समयमा तयार गनुपर्छ । यदि फूल तयार हुँदा केही दिन तलमाथि भएमा पनि व्यापार हुन सक्दैन’, उनले भने ।
हाइब्रिड बिउ विदेशबाट
धर्मकर्मदेखि अन्तिम संस्कारसम्म आवश्यक पर्ने फूलहरू पछिल्लो समय विकसित देशबाट नेपालमा आउने गर्छ । कतिपयले हाइब्रिड बिउ नै नेपालमा ल्याएर बिरुवा तयार गर्ने गर्छन् । गुप्ता नर्सरीले पनि हाइब्रिड बिउ हल्याण्ड, डेनमार्क र केही भारतबाट ल्याउने गर्छ ।
‘झुप्प थुङ्गा भएका फूलहरू सजावटका लागि बढी माग हुन्छ । त्यस्ता फूलको आवश्यक हाइब्रिड बिउ हामीले विदेशबाट ल्याउँछौँ’, सञ्चालक शम्भु गुप्ताले भने ।
उनीहरूले डयान्कस, सिनेरिया, पिटुनिया, फलक्सलगाएका बिउ विदेशबाट ल्याउने गरेका छन् ।
अबको योजना : तरकारीसँगै फलफूलको व्यापार
२०२२ सालमा स्व. रघुनाथ गुप्ताले सुरुमा तरकारीसँगै फलफूल खेती सुरु गरेका थिए । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै गुप्ता परिवार तरकारीसँगै फलफूल खेतीलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।
‘तरकारी खेतीलाई सँगै अगाडि बढायौँ भने बुबाको सपना पनि पूरा हुनेछ’, सञ्चालक सुरज गुप्ताले भने, ‘त्यही योजनाका साथ हामीले पाल्पामा जग्गा खोज्ने काम गरिरहेका छौँ ।
पाल्पाको प्रभासमा ६० लाख रुपैयाँको लगानीमा २० रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती सुरु भइसकेको र १ सय ५० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिउने अन्तिम तयारी भएको उनले बताए । त्यहाँ स्कस, सिमी, लहरे सिमी, कागतीलगायतका तरकारी खेती गर्ने र उक्त तरकारीलाई इटाली पठाउने योजना गुप्ता परिवारको रहेको छ ।
गुप्ता गु्रप प्रा.लि.मार्फत् विभिन्न प्राजेक्टहरूबाट काम भइरहेको समेत उनले बताए । उनले प्याकेजिङ, ग्रेडिङ गर्नुका साथै त्यहाँ रहेका किसानहरूको समेत तरकारी खरिद गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
तेस्रो पुस्ताका अजय लन्डनमा पढेर नर्सरी व्यवसायमा
स्व. रघुनाथ गुप्ताका नाति अजय गुप्ता पनि अहिले नर्सरी व्यवसायमा आबद्ध छन् । लन्डनमा एमबीए मास्र्टस गरेर गार्डेनसम्बन्धी डिप्लोमा पनि पूरा गरी नेपाल फर्केका अजय ठूला होटलहरूमा बगैँचाको डिजाइन गरी फूलहरूले भरिदिन्छन् ।
तिलोत्तमास्थित टाइगर रिसोर्टको बगैँचाको डिजाइन अजय गरेका हुन् । त्यति मात्र होइन, लुम्बिनीको होटल पवल प्यालेस, पाल्पा दरबार, रानीमहल अगाडिको बगैँचा, होटल ¥याडिसन र वाटर पार्कहरूमा अहिले अजयले डिजाइन गरिरहेका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले अघि सारेको ग्रिन तिलोत्तमा अभियानमा पनि अजयको सल्लाहबाट बेगमबेली र स्टोनिया लगाइएको छ । रघुनाथका अर्का नाति अर्जुन पनि हाल अस्ट्रेलियामा एग्रिकल्चरसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
उत्कृष्ट नर्सरीका रूपमा पुरस्कृत
सन् २००३ मा स्विट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित बीआईडी संस्थाले इन्टरनेसनल गोल्ड स्टार अवार्ड गुप्ता नर्सरीलाई प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले २०६४ सालमा कदरपत्र प्रदान गरेको छ । त्यसबाहेक यस क्षेत्रमा हुने मेला महोत्सवबाट नर्सरीले धेरै पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, ८ चैत २०७६, ०२:५९:००
मन्त्रालयले अलपत्र पारेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विवाद टुंगियो
गुल्मीको रूरूक्षेत्रमा पहिराेमा पुरिएर एकैघरका ४ जनाकाे मृत्यु
नरैनापुरको विकासमा अवसर बन्यो कोरोना भाइरस